फिल्मी शैलीमा मारिएका जनरल सुलेमानीको बदला लिन छुरा प्रहार, कसरी घट्यो घटना ? — Imandarmedia.com
फिल्मी शैलीमा मारिएका जनरल सुलेमानीको बदला लिन छुरा प्रहार, कसरी घट्यो घटना ?
एजेन्सी। एउटी इरानी महिलाले इरानी जनरल कासिम सुलेमानीको हत्याको बदला लिन एक व्यक्तिसँग डेटिङको नाटक गरिन्। पुरुषसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्ने क्रममा उनले ती पुरुषको घाँटीमा २ पटक छुरा प्रहार गरिन् ।
घटना अमेरिकाको लस भेगासको हो। महिलाको नाम निका निकोबिन हो। कासिम सुलेमानी सन् २०२० मा अमेरिकी ड्रोन आक्रमणमा मारिएका थिए । लस भेगास रिभ्यु-जर्नलका अनुसार हेन्डरसन प्रहरी विभागले २१ वर्षीया निका निकोबिनलाई पक्राउ गरेको छ।
उनले डेटिङ साइट ‘प्लेन्टी अफ फिश’ मा एक पुरुषलाई फसाएको आरोप छ। अनि उनले केवल यत्ति उद्देश्यको लागि उनीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखिन् ताकि उनलाई चक्कुले आक्रमण गर्न सकियोस्।
घटनाअघि निका र उनको साथीले होटलमा कोठा बुक गरे। दुवै कोठामा पुगे। त्यसपछि महिलाले बत्ती निभाइदिइन् । र, दुवैले शारीरिक सम्बन्ध बनाउन थाले। यसैबीच निकाले आफ्नो पार्टनरको आँखामा पट्टी बाँधिदिइन् अनि पर्सबाट चक्कु निकालिन्।
महिलाले आफ्नो पार्टनरको घाँटीमा दुई पटक छुरी प्रहार गरिन् ।घटनाका सम्बन्धमा पीडितले घाँटीमा दुखेको महसुस गरेको प्रहरीलाई बताए। त्यसपछि उनले निकालाई धक्का दिए । अनि कोठाबाट बाहिर भागेर प्रहरीलाई बोलाए।
प्रहरीका अनुसार निकाले पनि कोठाबाट भागेर होटलका कर्मचारीलाई आफूले एक व्यक्तिलाई छुरा प्रहार गरेको बताएकी थिइन्। पछि ती महिलाले बदला लिन आफूले पुरुषलाई छुरा प्रहार गरेको प्रहरीलाई बताइन्।
ती महिलाले आफूले ती पुरूषलाई मार्न नचाहेको बताइन्। प्रहरी रिपोर्टका अनुसार निका कासिम सुलेमानीको हत्याको बदला लिन चाहन्थिन्, जसलाई सन् २०२० मा अमेरिकी सैनिकले मारेका थिए।
प्रहरी रिपोर्टका अनुसार इरानमा कासिम सुलेमानीको हत्यामा अन्याय भएको निकाको विश्वास छ। निकाको फेसबुक पेजका अनुसार उनी लस भेगासकी बासिन्दा हुन्।
पहिले उनी साइकल बारमा फ्रन्ट डेस्क एसोसिएटको रूपमा काम गर्थिन्। निकामाथि ज्यान मार्ने प्रयास, कुटपिट र चोरीको अभियोग लगाइएको छ। उनी ६० हजार डलर धरौटीमा छन्।
तेस्तै, युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको ४४ औँ दिन पुग्दा युद्धमा “ठूलो क्षति बेहोरेको” रुसले स्वीकार गरेको छ। राष्ट्रपतिका प्रवक्ता दीमित्री पेस्कोभले ब्रिटिश टेलिभिजन च्यानल स्काइ न्यूजलाई रुसी सेनाको क्षति “हाम्रालागि ठूलो दु:खान्त हो” भनेका छन्।
उनले मस्कोले उसको युद्धको लक्ष्य “आउँदा दिनमा” प्राप्त गर्नेछ भन्ने आशा राखेको बताए। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार परिषद्‌बाट बुधवार रुसलाई निष्कासन गरेपछि पेस्कोभको त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको छ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घका १९३ मध्ये ९३ देशले रुसको विरुद्धमा मतदान गरेका थिए।उनीहरूले रुसले आफ्नो नियन्त्रणमा रहँदा बुचा शहरमा गरेको आम मानव अधिकार उल्लङ्घनको आलोचना गरेका थिए।
त्यसको प्रतिक्रियामा रुसले परिषद्‌बाट राजीनामा दिएको छ।परिषद्ले युक्रेनमा जारी मानव अधिकार तथा मानवीय सङ्कटप्रति गहिरो चासो व्यक्त गरेको छ। र युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रुसले बोरोदीयङ्कामा थप अत्याचार गरेको बताएका छन्।
पेस्कोभले बुचामा भएको आम हत्यामा रुसी सेना जिम्मेवार रहेको आरोप अस्वीकार गर्दै स्काइ न्यूजलाई “हामी झुटा र असत्य समाचार भोगिरहेका छौँ” भने।उनले कुनै आधारबिना नै उक्त शहरमा मारिएका भनिएका व्यक्तिका तस्बिरहरू नक्कली भएको बताए।
तर उनले रुसले त्यहाँ ठूलो सङ्ख्यामा आफ्ना सैनिक गुमाएको बताए। २५ मार्चका दिन रुसको रक्षा मन्त्रालयले युद्धमा उसका १,३५१ जना सैनिक मारिएको बताएको थियो। युक्रेनले भने १९ हजार रुसी सैनिक मारिएको बताएको छ।
रुस र युक्रेनको अनुमानित रुसी फौज मारिएको भन्ने तथ्याङ्क स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन।र विश्लेषकहरूले रुसले आफ्नो तर्फको सैन्य हताहती सङ्ख्यालाई घटाएको हुनसक्ने ठानिरहेका छन् र युक्रेनले आफ्नो नैतिक बल बलियो बनाउन सङ्ख्या बढाएको हुन सक्ने ठान्छन्।
पश्चिमा नेताहरू ७ हजारदेखि १५ हजार रुसी सेना मारिएको विश्वास गर्छन्। सन् २००० देखि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका प्रवक्ता रहँदै आएका पेस्कोभले रुसले युद्ध अन्त्यका उपायको खोजी गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
हाम्रा सेनाले सैन्य कारबाही अन्त्य गर्न सक्दो गरिरहेका छन्” उनले भने। “र हामी आशा गर्छौँ कि आउँदा दिनमा निकट भविष्यमै युक्रेनी र रुसी प्रतिनिधिबीच सम्झौता भएर रुसको कारबाहीले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्नेछ।”
रुसले किएभबाट आफ्ना सेना पछाडि हटाएको छ र उसको युद्धलाई पूर्वी युक्रेनी क्षेत्रमा केन्द्रित गरेको छ तर लडाइँ अन्त्य हुने सङ्केत देखिएको छैन।युक्रेनका उपप्रधानमन्त्रीले पूर्वी युक्रेनका बासिन्दालाई भाग्न सकेसम्म भाग्न भनेका छन् र त्यहाँ गोलाबारी भइरहेका कारण उद्धारको काममा अवरोध उत्पन्न भएको छ।
युक्रेनमा युद्ध अपराध भइरहेको आरोप लगाउने पश्चिमा राज्यहरूले बिहीवार रुसी अर्थतन्त्रमाथि थप प्रतिबन्ध लगाएका छन्। अमेरिकी सिनेटले मस्कोलाई उसको “मोस्ट फेभर्ड नेसन” व्यापार स्थितिबाट हटाउन सर्वसम्मत मतदान गरेको थियो।
त्यसपछि प्ल्याटिनम रासायनिक पदार्थ फलाम र स्टीलमा नयाँ कर लगाइएको छ। र रुसी कोइला आयातमा आगामी १२० दिनमा क्रमशः प्रतिबन्ध लगाउन युरोपेली सङ्घ पनि सहमत भएको छ ।
युरोपमा प्रति वर्ष ४ अर्ब डलर बराबरको कोइला आयात हुने गरेको छ। तेस्तै, रुसको संसद्‌मा प्रधानमन्त्री मिखायल मिशुस्टिनले वृहत् आर्थिक नाकाबन्दीका कारण रुसमा दशकौँ यताको नराम्रो आर्थिक समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन्।
उनले भने “अहिलेको अवस्थालाई तीन दशक यताकै सबभन्दा कठिन समय भएको छ यस्ता प्रतिबन्ध त शीत युद्धको कठोर दिनमा समेत लगाइएको थिएन।”तर उनले पश्चिमा प्रतिबन्धको असर सीमित भएको भन्दै,
समग्र अर्थतन्त्रको मुख्य पाटो आर्थिक प्रणालीले भरथेग गरेको दाबी गरे। फेब्रुअरी महिनाको अन्त्यतिर ऐतिहासिक रूपमै रुबलको मूल्य असाध्यै तल झरे पनि अहिले युद्ध अगाडिको स्थितिमा फर्केको छ।
युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पश्चिमा सरकारबाट थप हतिया माग गरेका छन्। उनले “त्यस्तो हतियारले युद्ध मैदानमा युक्रेनीहरूले जित्नेछन् जुन रुस विरुद्धको सबभन्दा ठूलो नाकाबन्दी हुनेछ” भनेका छन्।